ထုတ်လုပ်မှုအတွက် audio / ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်းကျော်အိုင်ပီ - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်
Home » အသားပေး » ထုတ်လုပ်မှုအတွက် IP ကိုကျော် audio / ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း
ထုတ်လုပ်မှုအတွက် IP ကိုကျော် audio / ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများကနေမိုဘိုင်းနည်းပညာအရာအားလုံးမကြာသေးမီနှစ်များတွင်လျင်မြန်စွာချီတက်လျက်ရှိသည်နှင့်တူညီသောအော်ဒီယိုနဲ့ဗီဒီယိုအဆောက်အဦ၏မှန်သည်။ သို့သော်ပေးထားသောစက်ရုံအတွင်းအသုံးပြုရန်အသံနှင့်ဗီဒီယို routing ကို topology ဆယ်စုနှစ်မျဉ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်-built ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် Point-to-point cabling အပေါ်မှီခိုသောဤနည်းပညာ, တစ်အပြောင်းအလဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Internet Protocol (IP) ကိုအခြေခံပြီးဖြေရှင်းချက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများပို့ဆောင်နေသောလမ်းတော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နည်းပညာများနှင့်မဆိုစက်ရုံ update ကိုသို့ပေါင်းစည်းထားရမည်။
အသံနှင့်ဗီဒီယို routing ကိုဗဟို, Point-to-point ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက် patch ကိုကြိုးနှင့်တိုးပွား Analog စ router များနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ အားလုံးအချက်ပြသည့်လမ်းကြောင်းပြုလေ၏ဘယ်မှာအလယ်ပိုင်းတည်နေရာပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကို formats ဒစ်ဂျစ်တယ်မှ Analog စကနေပြောင်းလဲသွားသကဲ့သို့, ဒီအခြေခံ routing ကိုနည်းစနစ်ပင် AES အသံ, SDI ဗီဒီယို, နှင့်မြှုပ်နှံရန်အသံနှင့်အတူ SDI ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲသွားတယ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာပို့ဆောင်ခံရသည့်အချက်ပြမှုများနှင့်သစ်တစ်ခု signal ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, အစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်အပေါငျးတို့သ cabling နှင့်လမ်းကြောင်းပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကအထူးကုပြုစျေးကြီး, မကြာခဏစနစ်များကိုအလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့ဆိုလိုသညျ။
IP ကိုလမ်းကြောင်းမယ့်အဲဒါကိုဖယ်ရှားတစ် router- အစားမထိုးပါဘူး။ အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ, အသံနှင့်ဗီဒီယို routing ထည်တစ်ခုလုံးကွန်ယက်ကိုတလျှောက်လုံးဖြန့်ဝေသည်။ ဤကွန်ယက် (COTS) စီးပွားဖြစ် Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကို အသုံးပြု. တည်ဆောက်မဆိုစီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းစနစ်အသုံးပြုသောတူညီဟာ့ဒ်ဝဲ hardware- ။ COTS ဟာ့ဒ်ဝဲ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူလူတိုင်းအဘို့ဆင်းကုန်ကျစရိတ်ကားမောင်း, အစားအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ Audio / Video စျေးကွက်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်-built routing ကိုဂီယာဖွံ့ဖြိုးဆဲသည်ထက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ install အခြေစိုက်စခန်း, ဖြတ်ပြီးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုန်ကျစရိတ်မူတည်ပြီး။ ဤသည်ကိုလည်းရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအဆင့်မြှင့်ဆိုလိုတာကအသစ်နည်းပညာများနှင့်ကိရိယာများ၏ပိုမြန်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တောင်မှနောက်ထပ်လက်ရှိ IP ကိုနည်းပညာအသုံးချဖို့အသစ်သောစွမ်းရည်များလျင်မြန်စွာဆက်ပြောသည်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အဖွဲ့အစည်း (ISO) နှင့်လျှပ်စစ်၏ Institute နှငျ့အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများ (ကို IEEE) အားလုံးကွန်ရက်များအသုံးပြုတဲ့အခြေခံအိုင်ပီကွန်ယက်စံချိန်စံညွှန်းများ, ဒါ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏အသငျး (တူသောအသံနှင့်ဗီဒီယိုအဖွဲ့အစည်းများသည်SMPTE) နှင့် အသံအင်ဂျင်နီယာ Society က (AES) လျှောက်လွှာ-တိကျတဲ့ protocol များ၏အလွှာအပေါ်မိမိတို့၏အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုက IP routing ကိုဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတစ်ခုမှာထုတ်လုပ်သူများအကြားအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်၎င်း၏ 100 + အဖွဲ့ဝင်များကထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် Compatibility ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းထားတဲ့ IP ကိုမီဒီယာ Solutions (ရည်ရွယ်သည်) လုပ်ငန်းစုသည်မဟာမိတ်တို့ကမိန့်ခွန်းပြောကြားကြသည်၏ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့်အထွေထွေကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်အတူ SMPTE ST-2110 စံချိန်စံညွှန်းများ suite ကို။ အတော်များများကအဆုံးသည်အသုံးပြုသူများပြီးသားသေးငယ်တဲ့ခြေရာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သဘောပေါက်, IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းကြောင်းမှအကူးအပြောင်းကတဆင့်သူတို့ရဲ့လမ်းအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ကာလများတွင်ရိုးရာ routing ကိုစနစ်များနှင့်တကွ, ဒီဇိုင်း, install နှင့်လိုအပ် troubleshooting ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုလုံးကိုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းများအတွက်တူညီအကြောင်းကိုကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့အိုင်ပီစနစ်များကိုနောက်ခံအိုင်ပီ protocols များနှင့် IP switching အဖြစ်အသံနှင့်ဗီဒီယို protocol များ၏အပြည့်အဝနားလည်မှုနဲ့စတင်ပြီး, တူညီတဲ့တာဝန်များကိုများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုလုံးဝအသစ်တစ်စုံလိုအပ်သည်။
အကွိမျမြားစှာ Formats များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
ဒီနေ့ရဲ့အသံ-intensive ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အမျိုးမျိုးသောသတင်းရင်းမြစ်နှင့်ထုတ်လွှင့်အပေါ် Dolby-ဒစ်ဂျစ်တယ် (AC-3), Dolby-E, Desecrate 5.1, Desecrate 2.0, အခြားဘာသာစကားများနှင့်အမြင်အာရုံ impaired- အားလုံးအရပ်ဌာနစိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ဖော်ပြရန်အသံပရိုဂရမ်းမင်းအပါအဝင် formats- စက်ရုံအသံအခြေခံအဆောက်အအုံ။ ဤဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုချင်းစီအမျိုးမျိုးသောနေရာများကနေအစပြုတာဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သီးခြားစီစီးအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်း, သက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုဘောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့်တစ်ဦးဦးတည်ရာမှရှုံးထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုပုံစံအမွေစံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှု (SD) ထံမှ 4K HDR နှင့်ချုံ့ပုံစံများအပါအဝင် between- အတွက်အရာအားလုံးအထိအလွန်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဤအမူကွဲအားလုံးအနေနဲ့ IP ကို ​​routing ကိုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာနေရာချပေးနိုင်ပါတယ်။ အိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးပြုသူရှိကွောငျးဆို format နဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ရိုးရာ router များများသောအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကာသ, ပါဝါနှင့် cabling အများကြီးတက်ယူကြောင်းရည်ရွယ်ချက်-built ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ monolithic လုပ်ကွက်များဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီအရင်းအမြစ်နှင့်ဦးတည်ရာကို device ကိုဗဟို-တည်ရှိသော router ကိုချိတ်ဆက်ထားခံရဖို့ရှိပါတယ်, သစ်ကို formats မိတ်ဆက်သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုအာကာသလိုအပ်နေကြသည်သောအခါ, မြေတပြင်လုံး router- အစားထိုးသည့် solution- မကြာခဏအကုန်အကျများနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုက IP routing ကိုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ, routing ထည်တစ်ခုလုံးကိုလမ်းကြောင်းစနစ်ကအစားထိုးခြင်းမရှိဘဲတိုးတက်မှုနှင့်ချဲ့ထွင်ဘို့ခွင့်ပြု, အလိုတော်မှာတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ အသစ်သောပုံစံများများအတွက်ထောက်ခံမှု onboard သငျသညျအတိုငျး, သင်ရုံအစွန်းအပေါ် interfaces add, မြေတပြင်လုံး system ကိုအစားထိုးမလိုအပ်ပါဘူး။
IP ကိုလာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်းကျော်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသွင်ပြောင်းရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း။ SDI အားဖြင့်အသုံးမပြုတော့တဲ့ပြန်ဆိုပါလိမ့်မည် SMPTE ST-2110 နှင့် SDI သစ်ကို NTSC (သည် RS-170A) ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ တစ်ခုက IP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် Moving ကြီးမားတဲ့စျေးကြီးဟာ့ဒ်ဝဲဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်နှင့်ပုံစံများတစ်အကွာအဝေးထောက်ခံပါတယ်။ ထိုအဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အတူကြီးထွားလာတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။
ဒီအကူးအပြောင်းစီမံကိန်းနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အိုင်ပီ-based သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းကြောင်းမှ Moving လူတိုင်းအတွက်ညာဘက်ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်, ကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာ switch ကိုလုပ်သင့်တယ်လျှင်အခါအားလျော်စွာအကဲဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ပါပဲ။ ဒါဟာစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာ, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အဆင့်မြှင့်ဖို့အလားအလာအသွင်ပြောင်းအလွန်ကုန်ကျစရိတ် offset နှင့်အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏသည်ပေးနိုင်ပါသည်။
များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း Adorama စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖြေရှင်းနည်း
သင်၏အဖွဲ့အစည်းစဉ်းစားသို့မဟုတ် IP နည်းပညာပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်အဖြစ်, Adorama စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Solutions သင့်ရဲ့နည်းပညာဖြေရှင်းချက်ဖက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံနည်းပညာန်ဆောင်မှုများအသင်းနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံအကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူသင်၏အဖွဲ့အစည်းနည်းပညာလိုအပ်ချက်များ, ဝန်ထမ်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မြှင့်အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချအတွက်စိတ်ကြိုက်အကူအညီများအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူလမ်းညွှန်မှုခံယူနိုင်ပါတယ်။
"ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည် Adorama စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Solutions သင်၏အဖွဲ့အစည်းကူညီမှာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့်အတူအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရနိုင် www.adorama.com/corporate"
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို MStar ဆူညံသံလျော့ချခြင်း SoftAtHome တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို	2019-01-08
ယခင်: Samsung ကတီဗီ Plus အား Linear တိုက်ရိုက်လွှဝန်ဆောင်မှုအပေါ် US မှာဝိပဿနာကို TV မိတ်ဆက် Linear Channel ကို
နောက်တစ်ခု: မော်တော်ကား-in ACCESS နှင့် Irdeto ထံမှ Multi-Layer Security မှန်ဆောင်မှုများနှင့်ဒေတာများ Now ကိုကို Safe ကျေးဇူးတင်ပါသည်